Qaramada Midoobay oo sheegtay in ururka Talibaan bilaabay ugaarsiga dadkii u shaqeyn jiray ciidamada shisheeye – Calanka.com
Qaramada Midoobay oo sheegtay in ururka Talibaan bilaabay ugaarsiga dadkii u shaqeyn jiray ciidamada shisheeye
Daalibaan ayaa sare u qaaday baadi-goobka dadka u shaqeeya ciidammada Nato ama xukuumaddii hore ee Afgaanistaan, sida uu ka digay qoraal ka soo baxay Qaramada Midoobay.
Waxay sheegtay in kooxdu ay guri kasta ay baadhayaan si ay u helaan bartilmaameedyadooda, iyaga oo u hanjabaya xubnaha qoyskooda.
Kooxdan Taalibaan ayaa isku dayaysey in ay niyadda u dejiyaan reer Afghaanistaan ​​tan iyo markii ay xukunka la wareegeen, iyaga oo ballan qaaday inaysan jiri doonin “aargoosi”.
Laakiin waxaa jira cabsi laga qabo in Taalibaan ay haddu wax yar iska beddeshay tii hore ee 1990-maadkii oo lagu eedeeyey in ay fashay falal aad looga naxay.
Taalibaan ayaa qabsatay Kabul Axaddii, iyagoo ku baahay dalka oo dhan markii ciidamada shisheeye ay isaga baxeen.
Guushoodu waxay kooxda ku soo celinaysaa awoodda 20 sano ka dib markii lagu afgambiyay duullaankii uu Maraykanku hoggaaminayay.
“Kooxdii hore ee awoodda lahayd waxay faleen xad-gudubyo baahsan, oo ay ka mid yihiin dil dadweyne iyo ka mamnuucidda haweenka goobaha shaqada.”
Laakiin shirkoodii jaraa’id ee ugu horreeyay tan iyo markii ay dib ula wareegeen gacan ku haynta Afghaanistaan, kooxda waxay soo bandhigtay cod dhexdhexaadin ah, iyagoo ballanqaaday xuquuqda haweenka in la ixtiraami doono “iyo in la raacayo shareecada Islaamka”.
Waxa kale oo ay sheegeen in aysan doonayn “wax cadow ah oo gudaha iyo dibaddaba ah” ayna jiri doonto cafis loo fidin doono xubnihii hore ee ciidamada ammaanka iyo kuwa la shaqeeyay quwadaha shisheeye.
Awoodaha caalamiga ah – iyo qaar badan oo reer Afghaanistaan ah – ayaa weli shaki ku jira.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa sheegay in awoodda kaliya ee Taliban ay tahay rabitaanka xagjiriinta ee aqoonsi caalami ah.
Mar la weydiiyay ‘haddii uu u malaynayo in Taliban ay is -beddeshay,’ Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku jawaabay “maya”, isagoo intaa ku daray in kooxda ay wajahayso “jiritaan” doorasho oo ku saabsan haddii ay rabaan in la aqoonsado.